IIMVELISO EZI-17 EZIGQWESILEYO ZAMADODA EZINWELE EZIKHANYISIWEYO - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Iimveliso eziGqwesileyo zaMadoda eziQhelekileyo zeenwele
Ukukhangela ezona mveliso zibalaseleyo kumadoda aneenwele ezigobileyo? Abafana abaneenwele ezigobileyo bayazi ukuba kunokuba nzima kangakanani ukuba nesitayile kunye nolawulo lweenwele ezomeleleyo, ezirhabaxa, nezinenwele. Ngelixa iinwele ezintle…
Ukukhangela ezona mveliso zibalaseleyo kumadoda aneenwele ezigobileyo? Abafana abaneenwele ezigobileyo bayazi ukuba kunokuba nzima kangakanani ukuba nesitayile kunye nolawulo lweenwele ezomeleleyo, ezirhabaxa, nezinenwele. Ngelixa iinwele ezinkulu zinokunceda ukulawula ii-curls, usebenzisa ii-shampoos eziphezulu, ii-conditioner, kunye neemveliso zesitayile, kubandakanya iikhrimu, iipomade, iigel, izitshizi zetyuwa yolwandle, kunye nezixhasi, zingenza umahluko.
Nazi ezona mveliso zeenwele zisongiweyo zamadoda. Jonga ezi mveliso zilungileyo zeenwele zamadoda aneenwele ezigobileyo ukuze ufumane iindlela zokwenza iinwele ezipholileyo, uyeke u-frizz, ugcine ukhiye wazo uthambile, kwaye ufumane ii-curls ezithambileyo ngokwendalo.
1.1IBrickell yaMadoda yemihla ngemihla yokuQinisa iShampu
1.2I-Krieger + Sohne Shampoo yaMadoda
2.1IArtNaturals isiQinisi seNwele seArgan
2.2I-K + S yoMntu oLungisa iinwele
2.3Shea Ukufuma Ikhefu-In Conditioner
3Iimveliso eziBalaseleyo zeSitayile seNwele eziManyeneyo zaMadoda
4.1Ubungqina bokuPhila akukho Cream Styling Cream
4.2I-Redken Cream Serum yee-curls
4.3Uluhlu lweNdalo Matte Cream
5.1I-Eco Styler yokuThintela i-Gel yeenwele
6.1UBaxter waseCalifornia Clay Pomade
7.1I-TIGI yeNtloko yeNtloko yokuSebenza kweNwele
8Ukutshiza ityuwa yoLwandle
8.1Ubuhle ngoMhlaba woLwandle weTyuwa Ukutshiza ngeNwele
8.2I-BYRD yokuThumela ukuKhangela kwi-Surf
9.1Shea Ukufuma coconut Hibiscus Curl Ukuphucula iSmoothie
10Fumana ezona Mveliso zeNwele ziLungileyo zaMadoda
Ezona shampu zintle zamadoda ezinwele ezicoliweyo ziyacoca, zithambisa kunye neemeko zeenwele ngelixa zisusa iioyile ezigqithileyo kunye nokwakha ii-curls ezisempilweni. Nangona kunjalo, ukuba udlala iinwele ezigobileyo, uya kufuna ukunqanda ukuhlamba iinwele zakho yonke imihla. Tame frizz kwaye ugcine iinwele zakho zithambile, ziyakhazimla kwaye zinamanzi ngokukhetha ishampu efanelekileyo yeenwele ezigobileyo.
IBrickell yaMadoda yemihla ngemihla yokuQinisa iShampu
IBrickell yemihla ngemihla yokuQinisa ngeShampu yamadoda ilungele abafana abanethemba lokwenza ii-curls zabo zibonakale zijiyile, zigcwele kwaye zikhazimla. Yenziwe ngazo zonke izinto zendalo eziphilayo, kubandakanya ioyile yomthi weti, ipepermint yeoyile, ivithamin E, iiamino acid, kunye neprotheni enehydrolyzed, le shampu yamadoda yeenwele ezigobileyo yenziwa ngomgangatho engqondweni.
Iyakunciphisa ukukrala kwe-scalp kunye ne-itchiness, iyeke inkwethu, ivuselele iifollic ukukhuthaza ukukhula kweenwele, kunye nokubuyisela ukukhanya kweenwele zakho kwendalo. Ukuba unengxaki yokuqaqadeka, iinwele ezinqabileyo ezibonakala zonakele okanye zibhityile, le shampoo yokuthambisa iyakulungisa iphinde ivuselele iinwele zakho.
Ngaphandle kwee-sulfates, i-parabens, i-glycols, i-phthalates, iziqholo zokwenziwa okanye i-gluten, yimveliso ye-hypoallergenic ekhuselekileyo kumadoda anolusu olubuthathaka. Kwaye nangona isebenza kakuhle nazo zonke iintlobo zeenwele, isebenza ngokukodwa kwizinwele ezigobileyo.
Iphunga le-mint likhanya kwaye litsha, kwaye uya kuqala ukuqaphela iziphumo emva kweentsuku nje ezimbalwa. Ekugqibeleni, I-Shampoo yamadoda eBrickell yenye yeemveliso zokhathalelo lweenwele ezingaphezulu emadodeni.
Izimvo eziyi-3,690 Iimveliso zeBrickell zaMadoda zemihla ngemihla zokomeleza ishampu yamadoda, eyeNdalo kunye neOrganic equkethe iMint kunye neTi yoMthi weoyile yokuthambisa ukoma kunye nokuLuma kweNtsundu, iSulphate yasimahla kunye neParaben yasimahla, 8 Ounce, inevumba elimnandi
Oko Kwenzayo: I-shampoo yethu yendalo yamadoda idala ...
Eyenzelwe bani: Amadoda nokuba yeyiphi na iminyaka nangaluphi na uhlobo lweenwele ...
Isebenza njani: I-shampoo yamadoda ihambisa amandla, ...
$ 20.00 Jonga iAmazon
I-Krieger + Sohne Shampoo yaMadoda
Amagorha + oonyana yenza enye yezona shampu zintle zamadoda kwintengiso. Yenziwe ngezithako zendalo ezinje ngomthi weti kunye neoyile yepepermint, le shampoo iphezulu iya kuyinyibilikisa kwaye ibeke imeko entlonzeni yakho ukuthintela inkwitshi ngelixa ikunika iinwele ezikhazimlayo nezithambileyo.
Yenzelwe ukuqinisa isikhumba sakho sentloko kunye nokukhuthaza ukukhula kweenwele, ayizomisa iinwele zakho, nditsho nakwabafana abaneenwele ezigobileyo abahlamba rhoqo. Ukuqhayisa ngevumba elitsha le-mint kunye nokukhanya okukhanyayo, le shampoo ikumgangatho we-salon iya kugcina iifollic zeenwele zisempilweni kwaye zikushiye uzive unamandla kwaye uhlaziyekile.
Ngelixa isebenza nazo zonke iintlobo zeenwele, I-Krieger + Sohne Shampoo yamadoda kuza kakhulu kunconywe iinwele ezigobileyo.
Izimvo eziyi-2,731 I-Shampoo yeeNwele zaMadoda-Inomthamo weoyile yoMthi oVuselelayo - I-Krieger + iSöhne Man Series-Kuzo zonke iintlobo zeenwele-Sebenzisa isitayile sakho-Ibhotile yeoyunce eyi-16 (16oz (Ibhotile ye-16oz eyodwa))
I-OYI YOMTHETHO WOMTHI: Njengokuba ucoca intloko yakho phantsi ...
UKUGQIBELA: Yenzelwe ngokukodwa eyangoku ...
ZIHLAWULELE, ZIHLAZIYIWE, ZIHLAWULELE: Ukuqhubeka uyi ...
$ 17.99 Jonga iAmazon
Ukuba uthengela olona hlobo luchanekileyo lweenwele ezigobileyo zamadoda, khetha imveliso enezinto zendalo eziya kuthi zithambise kwaye zithambe ii-curls zakho ngelixa unikezela ngokhuseleko lwe-anti-frizz.
izitayile dreads for guys
Izinwele ezisikiweyo zithambekele ekuqhekekeni, ke uya kufuna ukutyala imali kwisimo esihle esiza kunika amandla omtya wakho, sibenze lula isitayile, kwaye sinike imbonakalo eqaqambileyo, engqindilili. Kwizinwele ezomileyo kakhulu, sebenzisa ikhefu lokucoca ulwelo ukucoca yonke imini kunye nokunciphisa i-frizz. Ezi zizinto eziphambili zokulungisa iinwele ezigobile!
IArtNaturals isiQinisi seNwele seArgan
IArtNaturals isiQinisi seNwele seArgan Yenziwe ngezinto zendalo zonke kugxilwe ekuthambiseni kunye nokondla iinwele ezomileyo zazo zonke iintlobo. Ipakishwe ii-acid ezinamafutha, ii-antioxidants, kunye nezinto eziphilayo ezinje ngeoyile ye-argan, esi sisimo sendoda esiqinisekisiweyo esinama-sulfates, parabens, phthalates, kunye neekhemikhali ezinobungozi.
Yenzelwe ukuba ilungele amadoda anolusu olubuthathaka, esi sixhobo siza kucoca amanzi kwaye sithambise ii-curls zakho ngelixa silungisa imitya eyomileyo, ecekeceke okanye eyonakeleyo. Ngokugcina iinwele zakho ezigobileyo zikwimeko efanelekileyo, le fomyula iya kunciphisa i-frizz kwaye ikhusele iinwele zakho imini yonke.
Kwimeko yokuphucula imeko yeenwele ezigobileyo, sukujonga ngaphezulu ArtNaturals .
Iingxelo ze-2,887 IArtNaturals iArgan yeoyile yokuCoca iinwele- (16 Fl Oz / 473ml) -Sulphate yasimahla-Unyango lweenwele ezonakalisiweyo kunye nezomileyo-kuzo zonke iintlobo zeenwele-ezikhuselekileyo kwizinwele eziphathwayo
I-ARGAN OIL: Ioyile yeArgan yaseMorocco yindalo ...
ZONKE IINTLOBO ZEENWELE: Isimo sethu esinzulu ...
IFOMU YOKUBUYISELWA KWISIMO SANGAPHAMBILI: Ayifani neemeko zokulungisa ...
$ 12.95 Jonga iAmazon
I-K + S yoMntu oLungisa iinwele
I-K + S yoMntu oLungisa iinwele ityebile iivithamini, umthi weti kunye neeoyile eziyimfuneko ezinceda ukuhambisa amanzi kunye nokuthambisa isikhumba esomileyo ngelixa zihlaziya ii-curls. Esi sifakisi samadoda sitshixa ukufuma kwaye siyeke inkwethu ukuze iinwele zakho zikhangeleke zithambile, zigcwele kwaye zisempilweni imini yonke.
Ngeoyile yomthi weti kunye neoyile yepepermint njengezona zinto ziphambili, ifomula yenzelwe ukuphelisa i-frizz, ekufuneka ibhenele kumadoda aneenwele ezigobileyo ezisokolayo ukuthambisa nokulawula ii-curls zazo ezingalawulekiyo. Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba ioyile yomthi weti yinto yendalo yokulwa ukungunda kunye nokuchasa, kwaye ibonakalisiwe iyasebenza ekunyangeni amabala.
Ikhaphukhaphu kunye namandla okwandisa ivolumu, oku Isixhobo samadoda nguKrieger + Sohne yimveliso ethandwayo enezibonelelo ezininzi.
888 Izinto ezithethwe ngabantu I-K + S yokuGcina iinwele kwaMadoda-Iimveliso zoNonophelo lweeNwele zaMadoda-Ifakwe ioyile yePeppermint yazo Zonke iintlobo zeenwele (16 oz Bottle)
⌘ IMPI ILUNGILE-Ukusuka phezulu kuye ezantsi, oku ...
⌘ I-OIL YOTHIXO-I-Peppermint Oil ...
PHILA IZINWELE ZAKHO - Amabala zizikhumbuzo ...
$ 19.99 Jonga iAmazon
Shea Ukufuma Ikhefu-In Conditioner
Shea Ukufuma Ikhefu-In Conditioner Unokwenza imimangaliso yeenwele ezigobileyo zamadoda njengoko elungisa kwaye ethambisa imicu kwi-lever enzulu, eqinisekisa ukusebenza okuhlala ixesha elide. Yenziwe ngezithako zezinto eziphilayo ezinjengebhotolo ye-shea eluhlaza, ioyile emnyama emnyama kunye nepepermint, le meko yokuhamba iya kukondla, ikhusele kwaye iphinde ivuselele ukugqitywa okuthambileyo.
Yenzelwe ukuba i-hydrate kakhulu ukuze ibe nokuthamba, ukuziva okugcweleyo, abafana kufuneka bayisebenzise le mveliso ngaphambi kokuthambisa iinwele zabo. Ilungile kuzo zonke iintlobo zeenwele kodwa ingakumbi ezinempembelelo kwizinwele ezomileyo kakhulu, imeko eyongezelelweyo kunye nokukhuselwa kuya kumisa i-frizz kunye ne-dandruff ngelixa unciphisa kunye nokwenza ii-curls zakho kube lula ukusebenza nazo.
Njengeyona ndawo ilungileyo yokushiya iinwele ezigobile zamadoda, Shea Ukufuma Kufanelekile ukuthenga ukuba ufuna ukunakekelwa kweenwele ezifanelekileyo.
Iingxelo ze-15,205 Shea Ukufuma komeleza kwaye ubuyisele umGangatho weKhefu kwi-Ounce eyi-16 (Ipakethi ye-1)
I-NOURISHES: Indibaniselwano ye-organic eqinisekisiweyo ...
UKULUNGISELELA: Igcwele i-Omegas, eJamaican ...
I-SMOOTHENS: Umxube we-Shea eluhlaza eqinisekisiweyo ...
$ 13.19 Jonga iAmazon
Iimveliso eziBalaseleyo zeSitayile seNwele eziManyeneyo zaMadoda
Nje ukuba iinwele zakho zicoceke, zilungiswe, kwaye zithambile, lixesha lokuba uqondise kwakhona ingqalelo yakho kwiimveliso zezona zitayile zilungele iinwele ezigobileyo. Iimveliso ezithandwayo zamadoda ezifanelekileyo zinokunceda ukuthambisa, ukumila, ukulawula, kunye nokubamba zonke iinwele ezintsha ezithandwa kakhulu ngabafana. Kodwa ubude obahlukeneyo kunye neenwele zifuna iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso.
Ngokubanzi, amadoda aneenwele ezimfutshane ezigobileyo kufuneka asebenzise ipomade, ijeli, okanye i-wax kwindawo ephezulu eza kugcina iinwele zakho zisendaweni yonke. Abafana abaneenwele ezinde ezigobileyo baya kufuna ukufaka ikrimu, ukutshiza ityuwa yolwandle, okanye ukonyusa imveliso ukukhulisa ivolumu, ukuhamba nokubhabha.
Ekugqibeleni kwehla ukuthungwa kweenwele zakho kunye neenwele ezipholileyo ozifunayo. Jonga ezona mveliso zithandwayo zokuhombisa iinwele zamadoda!
I-curl cream yamadoda elungileyo inokunceda ukuyeka iinwele ezinqabileyo, ichaze kwaye inyuse ii-curls zakho, kwaye yongeze ivolumu. Ngeyona cream yokugoba ilungele amadoda aneenwele ezigobileyo, jonga ezi mveliso zinemilinganiselo ephezulu kwintengiso.
Ubungqina bokuPhila akukho Cream Styling Cream
Xa uthengela iikhrimu zeenwele ezigobileyo, khetha imveliso elwa ne-frizz, inyusa ivolumu, kwaye ibonelele ngesixa esifanelekileyo sokufuma kwaye ukhanyisele ukugqibezela okugqibeleleyo. Ubungqina bokuPhila akukho Cream yeKhrinki enesondlo iibhloko ukufuma ukunciphisa iinwele ezinqabileyo, kwaye isebenza kakuhle kwiinwele eziphothiweyo eziphakathi ukuya kwezityebileyo.
Ngokubamba kakuhle, le mveliso ilula iya kunika iinwele zakho ukuthamba, ukuziva ukutyibilika kodwa ukujonga okupheleleyo. Isiphumo sokulungisa iinwele ezibonakala zisempilweni kunye nendalo ngokuhamba kunye nokuhamba.
Konke okufuneka ukwenze kukufaka iinwele ezifumileyo kancinane kwaye udibanise. Le khrimu yokuhombisa ilungile kwindalo, izitayile ezenziwe ngombala. Ukukhanya kwevumba le-citrus kunuka kamnandi kwaye akuyi kuzongamela izivamvo zakho.
Ngelixa kungabizi kakhulu, Ubungqina obuphilayo luphawu oluphezulu oluza kakhulu-lucebisa amadoda nabafazi abanee-curls.
Izimvo eziyi-2,759 Ubungqina obuphilayo Akukho Cream yesitayile esondlayo, 8 Fl Oz
Iphuhliswe nge-OFPMA enelungelo elilodwa lomenzi, i-anti-frizz ...
Imeko kwaye ulawula izinwele ezinqabileyo, ezingalawulekiyo ...
Igcina amanqanaba aphezulu okufuma ngelixa ...
$ 38.00 Jonga iAmazon
I-Redken Cream Serum yee-curls
Kunconywe indalo, iinwele ezonakeleyo, I-Serk yeCream Redum Yenzelwe iinwele ezigobileyo kunye ne-wavy. I-curl cream yamadoda ibonakalisiwe ukuthintela i-frizz ngelixa isonyusa ii-curls, inika iinwele zakho ukukhanya kwendalo kunye nokuziva usempilweni.
Imveliso iyaqhayisa ngeCurl Memory Complex etywina umswakama, oko kuthetha ukuba iinwele zakho ezigobileyo ziya kuhlala zihlala ixesha elide ukuze ungazihlambi yonke imihla ukufezekisa iziphumo ezimangalisayo.
Ilungele iinwele eziphakathi ukuya kwezide, Ikrimu yeenwele zikaRedken izogcina iinwele zakho zigude kwaye zithambile ngelixa ugcina inkcazo kunye nesimbo.
Uluhlu lweNdalo Matte Cream
Uluhlu lweNdalo Matte Cream yongeza imilo kunye nenkcazo kwii-curls zakho ngaphandle kokuzisindisela, iyenza ukuba ibe lukhetho oluhle kakhulu kumadoda afuna ukukhulisa kunye nokulawula iinwele zawo ezigobileyo.
Ngokubamba okuphakathi kunye nokugqitywa kwe-matte, le cream-based cream yeenwele ezigobileyo ihamba ngokugudileyo kwaye kulula ukuyisebenzisa. Faka isicelo kwizinwele ezomileyo ukuze ubambe ngokuqinileyo okanye iinwele ezifumileyo ukuze ujongeke. Ngethamsanqa, ayisoze iphazamise okanye ishiye iinwele zakho ziziva zincinci, kodwa iya kugcina iinwele zakho zibhalwe usuku lonke.
Idityaniswe nevumba elimnandi leVanilla amantombazana abonakala ngathi ayathanda, Layrite yendalo Matte Cream inokukunceda uthayiphe zonke iinwele ezigqwethayo zamadoda.
eyona hairstyle ilungileyo yamadoda
4.344 Izinto ezithethwe ngabantu I-Cavrite Matte Cream, Esisiseko, emhlophe, Cream Soda ethambileyo, 4.25 Oz
Flexible, ukubamba okuphakathi kugcina isitayile sakho endaweni ...
Ifomula elula ayizukulinganisa iinwele
Yongeza imilo, inkcazo, kwaye ayisoze yabetha
Eyona gel yeenwele ezigotyiweyo inokunceda isitayile kwaye ibambe iinwele zakho ngaphandle kokuyomisa. Ukufumana ijeli yeenwele elungileyo kunokuba ngumceli mngeni kule mihla. Ijeli elungileyo yeenwele ezigobileyo ichaza kwaye imile i-curls kodwa ayizukuphaphazela okanye iqine. Ngesi sizathu, uya kufuna ngokupheleleyo imveliso engenatywala. Nazi iigels eziphezulu zeenwele ezigobileyo zamadoda!
I-Royal Locks Cream Cream Gel
I-Royal Locks Cream Cream Gel Ijeli yeenwele zobungcali eziza kongeza ukufuma, inkcazo, kwaye ubambe kwii-curls zakho zendalo. Yenziwe ngeoyile ye-argan, le jeli iya kuba kwimeko kwaye ingomisi iinwele zakho, ngaloo ndlela iyeke i-frizz.
Eyilwe njengenxalenye yejeli, ukhilimu kunye nesilungisi, le mveliso inyusa ii-curls, yonyusa ivolumu, kwaye igcina iinwele zikwindawo yonke imini. Iyaqhubeka igudile kwaye icocekile ngaphandle kwentsalela okanye ukwakha.
Ukuba ufuna ii-curls zakho ukuba zibhampise kwaye ube nokugqitywa kwendalo okubhaliweyo, oku I-Curl Cream Gel ngeRoyal Locks yeyona mveliso intle yokuhombisa iinwele ezigobileyo.
I-Eco Styler yokuThintela i-Gel yeenwele
I-Eco Styler yeOlive yokuCoca ioyile yenye yeells ezilungileyo kwiinwele ezigobileyo. Inika ukubambelela okuqinileyo, ilawula i-frizz, igudise ii-curls, ingangqushi okanye iflake, kwaye ayikaze ihambe i-greasy okanye i-oyile. Ukugqibelela kubafana abafuna ukucoceka, iinwele ezichaziweyo, le gel yeenwele ibonelela ngefomula engenatywala eyenziwe ngeoyile yomnquma.
Ilungele zonke iintlobo zeenwele, I-Eco Styler yeenwele Gel ihambisa zonke ezona mpawu zibalaseleyo zesitayile ngaphandle kwazo naziphi na iingxaki.
Iingxelo ze-6,582 Isitayile se-ECOCO Eco -Ioyile yeOlive 32 Oz (ECOOLV32)
Ikhuselekile kuzo zonke iintlobo zeenwele
$ 9.87 Jonga iAmazon
Izinto eziguqukayo kunye ezinamandla, ezona pomade zilungileyo zeenwele ezigotyiweyo zibonelela ngokulingana kokubamba, ulawulo kunye nevolumu. Nokuba ufuna ukwenza isimbo sekama ngaphezulu kokuphela, umphetho omfutshane, okanye enye into emfutshane ukuya kubude obuphakathi iinwele zamadoda, a Pomade ephezulu kweenwele ezishinyeneyo ezigudileyo kufuneka zenziwe mbuna kwaye zimilise ii-curls zakho.
UBaxter waseCalifornia Clay Pomade Isebenza ngokugqibeleleyo ngeenwele ezimfutshane, ezingqindilili ezinesitayile sokuhombisa zonke iinwele ezishushu ngoku. Le pomade yomeleleyo iyancediswa kukugqitywa kwe-matte kwimbonakalo yendalo, ebunjiweyo. Ngobuchule bokubumba, ukumila, kunye nokuchaza ii-curls zakho, le pomade yeenwele ezigobileyo yenye yezona mveliso zibalaseleyo kwintengiso.
Izinto zendalo ezinje ngodongwe kunye ne-beeswax ziya kuyinyusa kwaye ziyenyuse iinwele zakho, ngakumbi ukuba uneenwele ezintle. Ngapha koko, i-beeswax iyakugquma imitya yakho kwaye igcine i-hydrated, ukuthintela iinwele zakho ukuba zome. Ngevumba elikhanyayo, le pomade lulongezo olwamkelekileyo kwistayile sakho sokugcina isitayile.
Ngenye indlela, UBaxter weCream Pomade yaseCalifornia kukubamba ukukhanya okukhulu, ukugqitywa kwendalo pomade yamadoda aneenwele ezijijekileyo okanye ezigobileyo ezifuna intshukumo engaphezulu kunye nokuhamba ngesitayile sazo.
ujustin biebers isitayile seenwele
ISuavecito Pomade iza nokubamba okuphezulu kunye nokukhanya okuphakathi kokulawula okuphezulu kunye nokukwazi ukwenza isitayile. Ngokuhambelana okucocekileyo okuhamba ngokugudileyo kwaye kulula ukuyisebenzisa, le pomade isekwe emanzini inokukunceda utyhale kwaye utsale ii-curls zakho kulo naliphi na icala olithandayo.
Kwaye kuba inyibilikiswa ngamanzi, ihlamba ngamanzi nje kwaye ayizukushiya iinwele zakho zivakalelwa ngathi zityebile okanye zomile. Ngevumba lobudoda elinuka kamnandi kodwa elingenakoyisa icologne yakho, ISuavecito's Firme Bamba iPomade ilungele abafana abafuna isitayile ukuba bhetyebhetye ukuthambisa iinwele ezigobileyo.
$ 14.85 Jonga iAmazon
Ukuthambisa i-wax yamadoda iinwele ezijijileyo zisebenza ngcono ukuba iinwele zakho eziphakathi okanye ezimfutshane zifuna ukugqitywa kokubhalwa kunye nokubonakala okujiyileyo. I-wax elungileyo inokuhlukanisa ii-curls kwaye yongeze inkcazo yevolumu engaphezulu kunye nokubhampisa.
I-TIGI yeNtloko yeNtloko yokuSebenza kweNwele
I-TIGI yeenwele zeNtloko yeenwele inokuxabiseka ukuba ufuna ukudibanisa ukubamba, isitayile, ukubamba, kunye nemilo. Yenziwe nge-beeswax, i-cera carnauba kunye nomxube wobunini beepolymers, le wax yokuthambisa ibambe indawo ephezulu, imveliso ye-matte esetyenziswe kakuhle kwiinwele ezimfutshane ezigobileyo.
Ukuxhathisa kokufuma kwenyosi kulwa ne-frizz ngelixa ihambisa isiphelo sendalo esikhangeleka sicocekile, sityebile kwaye sisempilweni. Ukuchazwa kwe curls kunye nokulawulwa kwesitayile, I-TIGI yeNtloko yeBhedi yokuSebenza lifanelwe ingqalelo yakho.
Intengiso Izimvo eziyi-3,995 I-TIGI yeNtloko yeBhedi yaMadoda eyaHlulwa ngokuSebenza ngeWax, i-3 yeeyunce
Le mveliso yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu
Kubafana abafuna ukubamba, isitayile kunye nokugqitywa kwendalo
I-Beeswax, i-cera caranauba kunye nomxube weepolymers ...
I $ 9.97 Jonga iAmazon
Ukutshiza ityuwa yoLwandle
Eyona nto ityiwa ngetyuwa elwandle yamadoda inokuqinisa ii-curls zakho, yongeze ubume kwaye inike ivolumu yokujonga okungafunekiyo. Ukuba ufuna isitayile saselwandle kunye neenwele ezinamakhonkco ezinamacala, ezi zitshizi zetyuwa zolwandle zinokuhambisa izibonelelo mihla le.
Ubuhle ngoMhlaba woLwandle weTyuwa Ukutshiza ngeNwele
Ityuwa yolwandle ishiya ii-curls zigudile kwaye zichaziwe, kwaye Ubuhle Ngomhlaba woLwandle weTyuwa ibonelela ngokulingana okufanelekileyo kwayo yonke into oyifunayo. Izinto ezinobhetyebhetye kwaye ezinobunzima, oku kutshiza ityuwa yolwandle kuya kunika iinwele zakho ezigobileyo ukugqibezela okugqityiweyo, okumatte okuhamba.
Yenziwe ngezithako zendalo ezinje ngeti eluhlaza, i-aloe, i-algae, kunye neziqhamo ze-raspberry, isitshizi sihlaziya, iimeko, kwaye someleze ngelixa sinceda ii-curls zakho zijongeka kwaye zithambile.
Umzimba ongezelelweyo kunye nevolumu iya kukhokelela kwisitayile esityebileyo ngelixa kwahlulwa ii-curls ze-coil eziqinileyo. Ukuthintela ukomisa iinwele zakho, sebenzisa le mveliso yetyuwa yolwandle kwizinwele ezifumileyo. Ngaphezulu, iphunga elikhanyayo le-vanilla livumba kakhulu kuzo zonke iiakhawunti kwaye alinamandla.
Kwiinwele ezintle zaselwandle ezihamba rhoqo imihla ngemihla, fumana ibhotile yoku ukutshitshiswa kwetyuwa yolwandle .
Izimvo eziyi-3,257 Ukutshiza uLwandle ngeTyuwa yoLusu lweNwele-ukuCoca ngokuThambisa iinwele ngeemveliso zeenwele, ukutshiza kweenwele ngeOrganic Aloe Vera, Ukutshiza kwamaza olwandle, uLwandle lweTyuwa lokuLitshiza, Ukutshiza okuThambileyo, Ukuhambisa iimveliso zeenwele zabafazi, iHairspray 6oz
Umzimba ngebhotile: Olu Lwandle lweTyuwa yokuGqithisela i-Texturizing Spray ...
Ifomula engasindi: Ayisindi, khaphukhaphu ...
Isitayile samaza olwandle: Kungenxa yokuba olu tshizi lolwandle lu ...
$ 16.99 Jonga iAmazon
I-BYRD yokuThumela ukuKhangela kwi-Surf
I-BYRD yokuThumela ukuKhangela kwi-Surf Olunye ucoceko olugqwesileyo lwetyuwa lolwandle lweenwele ezigobileyo ezonyusa ubume, ukukhanya kwendalo, kunye nevolumu ngaphandle kokulinganisa ubunzima bakho. Izinto zendalo zendalo zibandakanya ityuwa yaselwandle, amanzi ecoconut, iiprotein zequinoa, ivithamin B5 kunye nokukhutshwa kolwandle, okwenza ukuba zilungele zonke iintlobo zeenwele kunye nabafana abanesikhumba esibuthathaka.
Ngapha koko, imveliso ayinazo i-sulphate, parabens, i-oyile yezimbiwa, ii-phthalates, okanye imichiza erhabaxa. Ukutya okunesondlo, ukucacisa kunye nokuqinisa ii-curls zakho ngaxeshanye, le nto yokuthambisa ityuwa yolwandle yamadoda iya kukushiya ngee curls ezithambileyo, zaselwandle imini yonke.
Njengenye yezona zinto zilungileyo zokutshiza kwi-surf kwintengiso, I-BYRD iphuhlise imveliso yesitayile eya kukufumanela amaza angasebenziyo ngalo lonke ixesha.
595 Izinto ezithethwe ngabantu I-BYRD yokubhala isicatshulwa se-Surf-Volumizing Beachy Spray ngeTyuwa yoLwandle kunye naManzi eCoconut, iVitamin B5, uKhuselo lwe-UV, i-Mineral Oil Free, i-Paraben Simahla, i-Phthalate Free, i-Sulfate Free
IMVELISO ZENWELE ZE-BYRD: Ukuqinisekisa ubunyani kunye ...
UKUTSHINTSHA UKUTSHINTSHWA KOKUTSHINTSHA: Ukuhambisa umyalezo nge-surfs ...
IZINTO EZILUNGILEYO: Ityuwa yaselwandle, amanzi ecoconut, iquinoa ...
Amadoda aneenwele ezijijekileyo kufuneka ukuba asebenzise i-curl enhancer. Iikhrim ezonyusa ii-curl, i-smoothies kunye neemveliso zibonelela ngezibonelelo ezifanayo nezokupholisa-amandla okugcina ukufuma kweenwele zakho kunye nemeko yokuyihlaziya imini yonke. Kwangokunjalo, ezona curl enhancers zisebenza kakuhle neenwele ezingqindilili, ezigobileyo ukuze zahlule kwaye ziqinise ii-curls ngenkangeleko ebonakalayo.
Shea Ukufuma coconut Hibiscus Curl Ukuphucula iSmoothie
Shea Ukufuma curl Ukuphucula Smoothie yeyona mveliso iphambili yesimbo yohlobo lwayo. Ngezithako ezisemgangathweni ezinjengekhokhonathi, i-hibiscus, iprotein yesilika, kunye neoyile ye-neem, iyazikhusela, izenze amanzi, kwaye ithambise iinwele ezigobileyo ngelixa iyekisa ukungunda kunye nokongeza ukukhanya.
Ngelixa liqhubeka njengokhilimu, ukungaguquguquki kuyajiya, yiyo loo nto kuzalisa ukufuma kakuhle ukuze kugqibe ukukhanya kwendalo.
Kunconywe ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye nokuyilwa kweenwele ezishinyeneyo, sebenzisa le curl-enhancer ngaphambi kokuba uqale wenze isitayile sakho osithandayo. Yisebenzise ngokulula kumanzi amdaka, itawuli eyomileyo kwaye wonwabele umphumo wokuchasana nefrizi.
Idityaniswe nevumba elimnandi elimnandi elitsha nelomeleleyo, uyayithanda indlela oku I-Curl yokuPhucula iCream nguShea Ukufuma izakwenza ukuba iinwele zakho ezibukhali zibonakale kwaye uzive.
Intengiso Izimvo eziyi-5,331 Shea Ukufuma coconut Hibiscus Curl Ukuphucula iSmoothie, ezininzi, 12 Ounce (290223Â)
Inika yonke imihla i-hydration
Iyacetyiswa ukuba isetyenziswe yonke imihla
Yongeza ukukhanya okuqaqambileyo
$ 9.59 Jonga iAmazon
Fumana ezona Mveliso zeNwele ziLungileyo zaMadoda
Iinwele ezipholileyo ezipholileyo kunokuba nzima kwisitayile kunye nokufezekisa. Kwaye abafana abaneenwele ezijijekileyo bahlala bekhathazwa kukungakwazi ukulawula, ukuthambisa nokulawula ii-curls zabo. Ngethamsanqa, ezona mveliso zeenwele zisongiweyo zamadoda zinokwenza wonke umahluko. Sebenzisa ii-shampoos, ii-conditioners, kunye neemveliso zesitayile apha ngasentla ukuze ufumane olona lukhulu iinwele ezithandwayo ezithandwayo .
inyanga ilanga liphuma
imiqondiso yelanga nemiqondiso yenyanga
amadoda ukuchetywa iinwele ezichetyiweyo amacala
iintlobo zeenwele zamadoda